Mihenjana ny tady eo amin’ny SMM sy ny governemanta : « Fanakorontanana ny fandrahonana sy fanenjehana ny mpitsara » | NewsMada
Mémoire en défense : la présidence frise le ridicule
LTC sy Lycée JJ Rabearivelo : mifampiandry kendry tohina ireo mpianatra
Mihenjana ny tady eo amin’ny SMM sy ny governemanta : « Fanakorontanana ny fandrahonana sy fanenjehana ny mpitsara »
Par Taratra sur 19/05/2017
Mazava ny valin-kafatry ny Sendikàn’ny mpitsara (SMM) ho an’ny minisitry ny Fitsarana sy ny eo anivon’ny governemanta. « Fanakorontanana ny fandrahonana sy fanenjehana ny mpitsara », hoy ny fanambaran’izy ireo. Mamaky ady tanteraka amin’ny mpitsara izany ny fitondrana, manomboka izao.
Mihenjana tanteraka ny tady. Nohitsin’ny fanambaran’ny SMM fa mandrangaranga sy mandrahona ny hanenjehana azy ireo amin’ny fitsarana ny fanehoan-kevitra na ny fanambarana ofisialy avy amin’ny mpitondra tato ho ato, manoloana ny fanatanterahan’ny mpitsara ny asany, araka ny tokony ho izy sy manara-dalàna. « Ny dikan’izany ho anay, tena fanakorontanana ny rafi-pitsarana misy eto izany. Melohinay tanteraka ny fitsabatsabahana amin’ny endriny samihafa na koa ny sakantsakana atao amin’ny fizotry ny raharaham-pitsarana. Tsy azo ekena koa ny teritery na fandrahonana eo am-panatanterahanay ny asanay », hoy ny fanambarana. Notsindrin’izy ireo fa faminganana tanteraka ny asan’izy ireo ny fitoriana ny mpitsara eo am-panaovana ny asany. Nandrangaranga fitoriana azy rahateo ny filoha nasionalin’ny HVM, Rakotovao Rivo, tamin’ny fanehoan-keviny tamin’ireo haino aman-jery, afakomaly, taorian’ireny fidinana ifotony notarihin’ny filohan’ny SMM, Faniry Ernaivo, nijery ireo voafonja, mitsabo tena etsy amin’ny HJRA tamin’ity herinandro ity. Nahazoan’izy ireo alalana tamin’ny mpampanoa lalàna rahateo izany…
Etsy andaniny, milaza ho tsy miditra na tsy mitsabaka amin’ny « Raharaha Razaimamonjy Claudine » ny fanjakana sy ny mpitondra. Efa niteny anefa io ny mpitarika ny HVM, sady minisitra, narahin’ny fanambarana ofisialy ary izao nitondran’ny SMM valin-kafatra izao.
Avelao hanao ny asany ny mpitsara
Araka izany, tsy mazava ny tian’ny mpitondra hahatongavana. Miketrika ny hampanginana ity raharaha ity, toy ireo tranga hafa niseho tany aloha ? Miketrika amin’ny fomba rehetra ary iza no matahotra inona ? Mazava ny fanambaran’ny KMF/Cnoe ny 14 avrily teo. « Mitaky hatrany ny fampiharana ny làlana izahay, ary manamafy fa mitovy ny rehetra eo anatrehan’ny lalàna. Na mpitondra fanjakana io, na olon-tsotra: meloka avokoa raha mandika azy. Noho izany, manameloka ny kolikoly sy ireo rehetra manome vahana ny tsy fampiharana ny làlana», hoy izy ireo. Mbola nohamafisin’ny KMF/Cnoe izany, tamin’ity herinandro ity, ka nilazan’izy ireo fa vola tokony hampiasaina amin’ny fampandrosoana ny tanàna no voahodina ho amin’ny tombontsoan’olon-tokana na olom-bitsy ka tsy ara-drariny izany. Midika izany fa tsy tokony hampanginina na havela amin’izao ny raharaha. Ny mpitondra ihany no mamerimberina fa avelao hanao ny asany ny fitsarana. Tsy tokony hohelingelenina na hanaovana ramatahora izany izy ireo, amin’ny fanatanterahana ny asany.
Conseil d’Etat : Le syndicat des agents des impôts a déposé une requête pour annulation du décret instaurant le système de visa électronique pour les étrangers avec la société Ametis, auprès du conseil d’Etat. 25/05/2018
Transports : La coopérative 143 va desservir l’axe Hôpital Itaosy – Analakely à partir de ce jour. Cette mesure allègera les problèmes de transport à Itaosy. 25/05/2018
Lémur vari : en danger critique d’extinction 25/05/2018
Basket-N1B dame : des quarts de finale fratricides 25/05/2018
Océan indien : le programme «Biodiversité» fait ses preuves 25/05/2018